Nnwom 59 NA-TWI - Ogye mpaebɔ - Gye me fi m’atamfo - Bible Gateway
Nnwom 58Nnwom 60
Nnwom 59 Nkwa Asem (NA-TWI)
59 Gye me fi m’atamfo nsam, me Nyankopɔn; bɔ me ho ban fi wɔn a wɔtaa me so no ho. 2 Gye me nkwa fi saa amumɔyɛ fo no nsam. Gye me fi awudifo no nsam. 3 Hwɛ! Wɔretwɛn akum me; atirimɔdenfo reboa wɔn ho ano atia me. Ɛnyɛ bɔne bi anaa biribi a enye bi na mayɛ; 4 ɛnna ɛnyɛ me mfomso bi nti, O Awurade, a enti wɔka wɔn ho kɔ wɔn atenae no. 5 Sɔre, Awurade Nyankopɔn Tumfoɔ na bɛboa me; w’ankasa bɛhwɛ, Israel Nyankopɔn. Sɔre na twe manmufo aso. Nhu amumɔyɛfo nkontompofo no mmɔbɔ! 6 Wɔsan ba anwummere pɔ so wɔ kurow no mu te sɛ akraman. 7 Tie wɔn kasatia ne wɔn ahunahuna. Wɔn tɛkrɛma te sɛ nkrante wɔ wɔn anom, nanso wosusuw sɛ obi nte wɔn nka. 8 Nanso woserew wɔn, Awurade. Wudi manmufo ho fɛw.